Wararka - C-star 2020 & Huayuemei Laydhka
C-star - Bandhigga Caalamiga ee Ganacsiga ee Shanghai ee Xalka iyo Isbeddellada Dhammaan wixii ku saabsanaa Tafaariiqda, xubin ka tirsan qoyska carwooyinka EuroShop Trade, ayaa si dhakhso leh u koray tan iyo markii ugu horreysay ee 2015 waxayna noqotay barxad weyn oo saameyn ku leh warshadaha tafaariiqda ee Shiinaha oo dhan.
C-star 2020 waxaa si guul leh loogu qabtay Sebtember 2-4th, 2020 Xarunta Caalamiga ee Expo ee Shanghai. Intii lagu jiray seddexdii maalmood ee guuleysiga, C-star wuxuu soo dhoweeyay 134 bandhigyo iyo 9,006 xirfadlayaal soo booqday
Warshadaha tafaariiqda ee Shiinaha ayaa soo maray isbeddel weyn oo ay ugu wacan tahay COVID-19 dhowr bilood gudahood. Shiinaha waxay guul weyn ka gaartay la dagaalanka COVID-19. Waa waqtigii saxda ahaa ee aan ka fekereyno sida loogu diyaar garoobo kobaca soo socda ee Huayuemei Laydh si adag uga qayb qaatay bandhiggan. Shaqaalaha bandhiggu waxay kaloo bandhigga ka diyaariyeen tallaabooyin looga hortagayo cudurrada faafa.
Qof kastaa wuxuu u baahan yahay maaskaro oo masaafo bulshada ka fog. Waxaan haysanaa hal maalin oo aan ku dhisno waabkeena. C-star 2020 waxaa si guul leh loogu qabtay Sebtember 2-4th, 2020 Xarunta Caalamiga ee Expo ee Shanghai. Waxaa jira dad badan oo booqda carwada.
Qolkeena wuxuu soo jiitaa dad badan si ay u soo booqdaan, maxaa yeelay RGB Dynamic Curtain LED ayaa lagu muujiyay qolka.
Naqshadeeyahayagu wuxuu adeegsadaa midab si uu u muujiyo dulucda bandhiggan, Waa mid indhaha soo jiidanaysa.
Dhamaan iftiinkayaga dambe ee Wareegga LED Strip waa la yarayn karaa, sidoo kale waxaa laga beddeli karaa heerkulka midabka iyadoo loo eegayo codsigaaga.
RGB Dynamic Curtain LED Strip weli waa midka ugu xiisaha badan qolka, wuxuu soo jiitaa dad badan oo soo booqda. Waxay qaadataa hab maamuuska DMX512, waxayna u isticmaashaa kantaroolka K-8000C barnaamij.
Waad naqshadeyn kartaa nooca animation-ka aad rabto, kan waxaad u isticmaali kartaa Daahfurka Dynamic Curtain LED Strip ee barnaamijka. Taasi waxay ka dhigi doontaa in qolkaaga uu noqdo mid weyn!
Waxaan kaqeyb qaadanay C-star waa muhiimad xiliyeed markii dhaqaaluhu waxyeelleeyay!
Waa wax aad muhiim noogu ah, nala soo socodsii macluumaad dheeri ah oo ku saabsan Laydhka Nalalka, waxaan isku dayi doonnaa sida ugu fiican ee aan ku horumarin karno tayada wax soo saarka iyo qaabeynta wax soo saar cusub.
Aynu hore u dhigno oo aynaan iska dhaafin fursaddaada 2021.